Malta Capital Valletta: Wepamusoro 5 Pasi Pese Akanakisa Maguta Madiki Mubairo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Malta Kuputsa Nhau » Malta Capital Valletta: Wepamusoro 5 Pasi Pese Akanakisa Maguta Madiki Mubairo
Awards • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Malta Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Yakadzika Barrakka Gardens muValletta, Malta guta guru
Condé Nast Mufambi yakazivisa zvakabuda pagore rayo Vaverengi 'Sarudzo Mipiro 2020 neValletta, Malta's Capital, UNESCO World Heritage Site, yakatarwa # 5 mu Nyika Dzakanakisa Maguta Madiki chikamu.
Valletta, yakavakwa neanodada Knights yeSt.John, yakanzi 2018 European Capital of Culture. Guta rine nhoroondo, mumakore mashoma apfuura Valletta rave kutonyanya kufarirwa nevashanyi nekuda kwezviitiko zvetsika, maresitorendi makuru, uye nharaunda yehusiku. Valletta ine maresitorendi maviri ane nyeredzi yeMichelin, Noni uye Zviyo. For Mutambo weZigaro (GOT) vateveri, ivo vanozoona akati wandei maficha akapfurwa muValletta apo mazhinji e WANAKA mwaka 1 yakapfurwa panzvimbo muMalta.
“VaMalta vese vanokudzwa zvikuru uye vanodada kuti Valletta akasarudzwa uye akaiswa panhamba # 5 pa Nyika 'Akanakisa Maguta Madiki nevaverengi venzvimbo ine mukurumbira uye yakasarudzika yemusoro wenhau se Conde Nast Mufambi, ”Akadaro Carlo Micallef, Deputy CEO, Chief Marketing Officer, Malta Tourism Authority. Akawedzera, "Tinokoka avo vakafarira Valletta kuti vadzoke sezvo guta riri kuramba richichinja uye avo vasati vaiswa pamabhaketi avo e2021."
Kupfuura 715,000 Condé Nast Mufambi vaverengi vakaendesa nhamba isingadaviriki yemhinduro dzinoisa chiyero chavo chekufamba pasirese.
"Mhedzisiro yeongororo yegore rino, yakaitwa pakutanga kwe COVID-19 denda, chiratidzo chesimba rekugara kwechiitiko chekufamba," akadaro Jesse Ashlock, mupepeti weU.S. Condé Nast Mufambi. "Vanokunda vanomiririra akanakisa pane ese akanakira vateereri vedu uye vanopa kurudziro yekuronga rwendo kune ese mavhoti atisingakwanise kumirira kuzotevera."
The Condé Nast Mufambi Vaverengi 'Sarudzo Mipiro ndeyekureba-kumhanya uye kwakakurumbira kuzivikanwa kwekugona muindasitiri yekufamba. Rondedzero izere yevanokunda inogona kuwanikwa pane iyo Condé Nast Mufambi Website.
Iwo 2020 Vaverengi 'Sarudzo Mipiro yakatsikiswa pa Condé Nast Mufambi website yepaiti www.cntraveler.com/rca uye vakapemberera mumagazini yaNovember ya Condé Nast Mufambi US uye UK anodhinda edhisheni.
Zvitsuwa zvine zuva reMalta, pakati peGungwa reMediterranean, zvine musha wakasarudzika wenhaka yakasimba, kusanganisira huwandu hwakanyanya hweUNESCO World Heritage Sites mune chero nyika-nyika chero. Valletta yakavakwa neanodada Knights yeSt.John ndeimwe yezviono zveUNESCO uye European Capital of Culture yegore ra2018.Malta patrimony mumatombo ematombo kubva kune ekare-emahara matombo ekuvakisa pasi rose, kune imwe yeBritish Empire inotyisa masystem ekuzvidzivirira, uye anosanganisira musanganiswa wakapfuma wemapurani epamba, echitendero, nemauto kubva kunguva dzekare, medieval uye kutanga kwazvino nguva. Nemamiriro ekunze ane zuva rakajeka, mahombekombe anoyevedza, hupenyu husiku hunobudirira, uye makore zviuru zvinomwe zvenhoroondo inonakidza, pane zvakawanda zvekuona nekuita. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Malta, shanya www.chandiramani.com.